Boqortooyada Eswatini waxay mideysay Dalxiiska Afrika
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Wararka Dowladda » Boqortooyada Eswatini waxay mideysay Dalxiiska Afrika
Safarka Dalxiiska • Guddiga Dalxiiska Afrika • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Eswatini Breaking News • Wararka Dowladda • Shirka Warka Warshadaha • Shirarka • News • Dadka • Dib-u-dhiska • Dalxiiska • Hadalka Dalxiiska • Sirta Safarka • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda • Wararka kala duwan
Guddiga Dalxiiska Afrika wuxuu u guuray Eswatini
“Dal ahaan, waxaan ku faraxsanahay shaqada Guddiga Dalxiiska Afrika, Maanta waxay ku asteeyeen maalin aad muhiim ugu ah ATB. Mustaqbalku wuxuu aad ugu ifayaa Dalxiiska Afrika. ” Kuwani waa ereyadii Wasiirka Dalxiiska ee Boqortooyada Eswatini, Mudane. Moses Vilakati, oo ku dhawaaqay Boqortooyada ayaa hadda martigalinaysa Xarunta Gudiga Dalxiiska Afrika, wuxuuna bilaabay qaab dhismeed shirkadeed oo loogu talagalay guddiga dalxiiska.
Cutub cusub oo loogu talagalay Guddiga Dalxiiska Afrika ayaa maanta lagu dhawaaqay furitaanka xaruntiisa cusub iyo qaabdhismeedkeeda abaabul ee Boqortooyada Eswatini.
Saaxiibada Dalxiiska Afrika oo ka kala yimid gobollo badan oo ka tirsan Afrika iyo adduunka oo dhan ayaa ka soo qaybgalay munaasabaddii billowga ahayd ee muuqaalka iyo muuqaalka ahayd oo ka dhacday Hilton Garden Inn ee Mbane, caasimadda Eswatini.
Waxaa la shaaciyay isbahaysi istiraatiiji ah oo u dhexeeya Golaha Dalxiiska Afrika (ATB) iyo Shabakadda Dalxiiska Adduunka (WTN).
Eswatini, oo hore loo oran jiray Swaziland waa Dal leh Dhaqan Qani ah. saaxiibtinimo iyo sharaf leh. Maanta Eswatini wuxuu noqday xarunta cusub ee Dalxiiska Afrika, isagoo faafinaya fikradda hal Meel Dalxiis oo Afrikaan ah. Boqortooyada waxay soo dhaweysay Xarunta Gudiga Dalxiiska Afrika iyo qaabdhismeedka abaabul ee ka socda wadankeeda.